Indlela Yokuthola Umsebenzi E-Dubai ku-2020 🥇 【# No.1Guide】 Ukusiza Ukuchitha!
Indlela Yokuthola Umsebenzi E-Dubai ku-2020?
UJohn Smith oyi-CEO
Nawe noma qala ukusesha noma uthole izindaba ezithile ngemisebenzi yaseDubai. Futhi umusha emakethe yokuqashwa e-UAE. Kufanele uqale ushaye inkampani enkulu kunazo zonke kuqala. Futhi umqashi ongcono kunabo bonke eDubai namanje yi-Emirates.
IDubai City Company ihlala ihlinzeka ngemininingwane emihle. Lesi sikhathi sinikeza imininingwane yokuthi ungaludlula kanjani i-Emirates Cabin Crew Open Day / Ukuhlola + Ingxoxo (Amathiphu wokuqasha + imibuzo)
Ukuthola umsebenzi ikakhulukazi e-United Arab Emirates kungathatha isikhathi. Kufanele ukhumbule ukuthi abantu abaqasha ukuhola bezungeza amakhulukhulu ezincwadi kabusha nsuku zonke. Futhi ngokuqinisekile abantu abasebenza empeleni enkampanini i-Emirates. Angazi kakhulu ngawe. Ngakho-ke kuzodingeka bahlole i-CV yakho isipiliyoni sakho futhi, imfundo yakho yomuntu siqu futhi lokho kuzobavumela ukuthi bathole okuningi okwengeziwe ngawe nokuthi wenzani empilweni.
Ngakho-ke qiniseka njalo ukuthi uzolandela inkombandlela yethu engezansi. Ngoba esikwenzayo empeleni abafuna umsebenzi sizama ukusiza uthola okuningi ngangokunokwenzeka ngokuya ngokufuna umsebenzi eDubai nase-Abu Dhabi. Sinikezela ngezeluleko ezithile kanye nemininingwane ngemisebenzi futhi ukuthi ungasiphatha kanjani isicelo sabangabaqashi e-United Arab Emirates futhi kwesinye isikhathi esifundeni se-Gulf.
Ukuze uqiniseke ukuthi uzokwazi ube nolwazi oluhle futhi oluphelele. Sihlinzeka ngemininingwane yakho yokuthi ungasenza kanjani isicelo sakho e-Emirates ngendlela eyiyo.
Kule vidiyo, ungathola isibonelo sendlela yokugcwalisa i-Emirates Cabin Crew Online Job application kwi-Intanethi indawo yabo (isixhumanisi sithi - http://emiratesgroupcareers.com/engli…).
Inqubo yokufaka isicelo ibaluleke kakhulu ekufuneni kwakho umsebenzi. Udinga njalo ukuthi ube yi-100% uqinisekile ukuthi uhlelo lwakho lokusebenza alunasici ngokuya ngezidingo zokuqashwa. Bheka Ngezansi ku-movie ye-YouTube. Lo mfo wenziwe abafuna umsebenzi kanye nabantu abavela emhlabeni jikelele abangazi ukuthi bangagcwalisa kanjani izicelo zenkampani i-Emirates. Vele ngoba kuyinto enzima kakhulu ukwenza kanjalo abanye abantu empeleni basize abanye abantu ukuthi bakwazi ukuzilawula futhi bakwazi ukuhlinzeka ngawe nina imininingwane enhle yokuthi ungakwenza kanjani lokho ngendlela efanele. Futhi lokho kuzokuvumela ukuthi uthole uhlelo lwakho lokusebenza ngaphambi kwabameli bokuqashwa ku Inkampani enkulu kunazo zonke e-United Arab Emirates.
Okokuqala, Yenza i-CV Ehle
I-CV ephelele, noma yini?
Ingabe uyayithumela i-CV efanayo, noma ngabe ufaka izicelo ezikhundleni ezihlukile? I-"Wholesale" ephendula imikhangiso ingasebenza yehlisa ukusebenza kosesho lwakho. Isihluthulelo sempumelelo ukukhethwa kolwazi nokukhonjiswa kwamaqiniso okuyi ebaluleke kakhulu kumqashi ongaba khona.
Ukuqalisa kabusha kungenye yemibhalo ebaluleke kakhulu. E-Emirates, ekuqaleni, lo wumbhalo kuphela lokho kungasindisa impilo yakho. Yebo, ama-expats ajwayelekile ukukhuluma awanaki ukuthi aqhubeke futhi nezinhlamvu ezifanele zekhava. Lokhu yingakho Dubai City Company ukubeka umhlahlandlela wokuthi Ungawuthola Kanjani Umsebenzi eDubai ku- 2020 ?.
Impendulo yakho kokunikezwayo kungenzeka ubufakazi bokuzinikela nobuchwepheshe. Kubalulekile ukuthi uveze ukuthi uhlangabezana nokulindelwe ngumqashi ongaba khona eDubai. Ngesikhathi sokuhlaziywa kwesikhangiso, unethuba lokunquma ukuthi ulungiselele okufanele yini futhi uma wenelisekile ngemibandela enikezwa umqashi.
Kufanele ukhumbule ukuthi e-UAE. Bangu izinkulungwane zabathengi abafuna imisebenzi eDubai noma e-Abu Dhabi. Uma ucabanga ukuthi ungumuntu ofanele, yethula imininingwane ngawe ngendlela ecacile nenengqondo.
Isihluthulelo sokwakhiwa kabusha kobuchwepheshe ukuhlaziywa komsebenzi
Sifuna isazi ...
Inkampani yethu ifuna odokotela eDaily
Ngaphambi kokuphendula isikhangiso, cabanga ukuthi unamakhono afanele yini ukuthatha isikhundla esithile. Lapho wenza ukuhlaziya, ungahle ufike esiphethweni sokuthi kufanelekile ukuqala umsebenzi, isib.
Njalo qiniseka ukuthi ufaka isicelo sesikhangiso esifanele somsebenzi. Ngokwesibonelo, ukuthumela i-CV yakho ezinkulungwaneni zabaqashi ongabheka uchwepheshe wamazinyo futhi isipiliyoni sakho kumakethi akusizi neze nganoma yisiphi isikhathi.
Izibopho ngenkathi usesha umsebenzi
Ngokuhlaziya ubukhulu bemisebenzi enikezwe isikhundla, ungaqinisekisa ukuthi uzokwazi yenza imisebenzi yakho kahle ngolwazi nesipiliyoni sakho. Uma isenzo esithathwe ezinkampanini ezedlule sihambisana nezidingo ezibekwe kusimemezelo, uyobe unaso ithuba lokuhlangana nomsebenzi wakho omusha. Kubalulekile ukuthi ukhombise kwi-CV yakho ukuthi unolwazi oludingekayo namakhono.
Ubuncane besipiliyoni seminyaka eyi-x esesimweni esifanayo. Kwenzeka ukuthi abaqashi abalindelanga isipiliyoni. Kulesi simo, kufanelekile ukugxila encazelweni yemfundo namakhono. Kaningi, noma kunjalo, umkhuba ubalulekile.
Ukukhombisa ukuthi ubukade ubambe isikhundla esifana naleso osifaka isicelo manje, chaza umlando wakho wokuqashwa ngokunikeza isihloko somsebenzi, isikhathi somsebenzi nezibopho zakho. Kubalulekile ukuthi lokhu okuqukethwe kuhlangane ngemisebenzi ekhonjiswe kunikezwa komsebenzi.
Imfundo ... / izimvume ...
Umhlengikazi, unjiniyela wokwakha, uthisha - lezi yizibonelo zobungcweti obulawulwayo, okungukuthi lezo ezingasetshenziswa kuphela uma unamalungelo. Futhi esimweni sobunye ubuchwepheshe, njengesisebenzi se-PR, umhwebi noma umphathi wezinhlelo, umqashi unelungelo ukulindela imfundo ethize kumuntu ozongenela ukhetho.
Akubalulekile kuphela ukuthi iyiphi inkambo yokutadisha oyiphothulile. Kuyafaneleka futhi ukusho izifundo neziqeshana zokuqeqeshwa lapho uthola khona futhi wahlakulela amakhono afanele emsebenzini. Njengomdwebi wezithombe, ungabhala, ngokwesibonelo, mayelana nokuphathwa kohlelo, njenge-Adobe Photoshop, InDesign noma Corel Draw. Lapho ufaka isicelo sokuba ngumqeqeshi womuntu siqu, izifundo ezilandela iziqu emkhakheni wezokudla, njll. Ziba wusizo.
Ulwazi lwezinhlelo zekhompyutha ezifana ...
Izitifiketi zingasetshenziswa ukuhlinzeka ngamakhono athile wesoftware. Iphothifoliyo enamathiselwe kwi-CV yakho lungasetshenziswa futhi nokuqinisekisa ikhono lakho.
Ulwazi kolunye ulimi ezingeni ...
Kubalulekile ukuthi ucacisa izinga lentuthuko - lokhu akusebenzi emikhakheni yolimi kuphela kodwa nakulwazi lwezinhlelo zamakhompyutha. Ukuthola isiqinisekiso samakhono olimi, kufanelekile ukudlula ukuhlolwa kwesitifiketi. Njengengxenye yokulungiselela, ungaya esifundweni oyofunda kuso, isibonelo, amasu wokuhlola.
Ukuxhumana, ikhono lokuzibamba ngesikhathi… - amakhono athambile Kufanele unakekele ukuthi, ngenxa yokuhlaziya i-CV yakho, umqashi uthole ukuthi, ngokwesibonelo, uhlelekile. Ukuqinisekiswa kwekhono elinjalo mhlawumbe nenhlangano yezingqungquthela noma yokuhlanganisa umsebenzi nezifundo. Kubalulekile ukuhlukanisa lezo ezihambelana kakhulu nesiko lenkampani lokuhlela kusuka kumakhono athambile onawo.
Lapho wenza i-CV, kufanelekile ukubhekisa kokungeziwe, ngokuzithandela Izidingo ezishiwo umqashi. Lokhu kuzoba yimpahla enganquma ukuthi uzokwamukelwa ukuthi usebenze.
Uma uzobona - Sinikeza izithuba zomsebenzi e-Dubai ...
Lapho ufunda ingxenye yokugcina yesimemezelo, unethuba lokubona uma izimo ezinikezwa umqashi zikusiza ukufeza izinhloso zakho. Uma ucabanga ukuthi yebo, kufanele kushiwo kufushaniso lobuchwepheshe.
I-CV elicwengekile ingakunika inhlolokhono futhi ngenxa yalokho ufake isandla ekutheni uzokwamukelwa emsebenzini. Inani lama-CV athunyelwe ukuphendula izikhangiso alivumelekile; okubaluleke kakhulu ikhwalithi yabo. Ukusesha kukhona isebenza kangcono uma i-CV yakho yenziwe umuntu. Lapho wenza idokhumenti, kufanelekile ukunakekela hhayi kokuqukethwe kuphela kodwa futhi nefomu - lihlanzekile futhi libonakala. Uzokwakha idokhumenti yobungcweti kusetshenziswa izinkampani zaseDubai CV.
Iyiphi i-CV eqinisekisa ukuphumelela ku-2020?
I-ubunifu kepha nokho ngobuqili. Okwesimanje, kepha kuhlangene nefomu lendabuko. Ekuqaleni, kodwa ngokulula. Ngokumangazayo, kodwa hhayi ngamahloni. Ngokufanele, lokho akusho ukuthi kuyisicefe. Sikweluleka ukuthi ungayiqabula kanjani i-CV yakho ngonyaka omusha ukuze udonse ukunaka kwabaqashi.
Uthumela izicelo nsuku zonke, kepha akukho mpendulo ?. Awazi ukuthi yini inkinga? Mhlawumbe kufanele ubheke kahle i-CV yakho, futhi kahle uma uyinika othile ukuba ayifunde noma ayazi kahle ulimi lwesiNgisi. Ngokusho kochwepheshe bakwa-HR, lo mkhuba ubaluleke kakhulu. Imvamisa, imibhalo yesicelo igcwele ulimi, i-stylistic, sipelingi ne-typo.
Ikakhulu, isizukulwane se-Y manje sigxile ekuqhubekeni kabusha kokudala, kepha sikhohlwe ukugcina imithetho yokupela okulungile nokwenza amaphutha ayisisekelo wolimi - yithi, UJohn Smith, CEO weDubai City Company
Okuthile okungaphezu kwedokhumenti
I-CV ngesimo sephepha lokukhangisa, incwadi yamahlaya noma ividiyo. Okuqukethwe kuboniswe ngezimpawu, izimpawu, izithombe. Gcizelela infographic. Imfashini enjalo manje ibonakele kuzinhlelo zokusebenza. Abantu abaningi baphuza i-CV yabo njengomnikelo kunedokhumenti.
Ukusungula okunjalo kwamukelekile kakhulu, kepha uma nje ngaphandle komhlobiso futhi ulahlekelwe isitayela, kuzoba nemininingwane ebalulekile. Kumuntu oqasha kabusha, ukubonisa obala kubalulekile, idatha ethize mayelana umuntu wasebenza kuphi futhi nini, lokho akwenzayo, yimiphi imisebenzi ayenayo nokuthi yikuphi isipiliyoni ayesitholile.
Ukuthambekela kokufinyeza i-CV akukulethi imiphumela emihle - uyachaza uJohn. Ngokubona kwakhe, umbono othokozisayo ukulungiselela i-CV ngendlela yesiko futhi kufaka phakathi isixhumanisi kumaphrojekthi akho, iphothifoliyo noma kuwebhusayithi lapho ungabona khona ukuthuthukiswa kwemibhalo, isib. njengehlaya.
Ochwepheshe bakwa-HR babuye bazise ukukhokhisa okungaphezulu ngezinto ezintsha zobuchwepheshe. - Akuwona wonke umuntu oqashile ongakwazi, ngokwesibonelo, ukusebenzisa amakhodi we-QR nezicelo zeselula ezivumela ukufunda ama-CV. Kungcono ukuyiphatha njengesengezo, into eyengeziwe kunezixazululo ezijwayelekile - kugcizelela uJohn Smith.
Izitayela zohlelo lokusebenza
Ungasivelela kanjani esixukwini ?. Yini, ngaphandle kwe-infographics, isiphezulu manje?
I-website ye-Own - singabeka ulwazi oluthe xaxa kulokho ku-CV yendabuko, bonisa izintshisekelo zakho namakhono.
Ama-akhawunti asezingeni lokuqasha (njenge-akhawunti Yami Yomsebenzi) angenye lezo zindawo kuwebhu ezisixhumanisa nabaphathi abangaba khona. Kuhle ukubuyekeza amadokhumenti akho lapha ngonyaka omusha.
I-CV ngesimo sevidiyo - le yindlela ethokozisayo yokwethula inkampani yakho yamaphupho, kepha uma sizizwa sesaba phambi kwekhamera, sinezinkinga ngesichazamazwi futhi sikhuluma kahle, inkulumo yamahhala - ungaziphoqi kulolu hlobo lwesicelo.
Imithombo yezokuxhumana - evakashelwe izihloko, ngakho-ke kufanelekile ukuthi unakekele iphrofayili esebenzayo efanelekayo. Hhayi imboni yezokuxhumana kuphela kungaba wusizo ekufuneni umsebenzi. Ezinye zezindaba zabo zomsebenzi zibuye zivezwe ezingosini ze-Facebook.
Ichaza imicimbi noma amaphrojekthi esibamba iqhaza kuwo, ukwaba impumelelo ephumelelayo - singalanda amehlo abutho. Lutho ngenkani
Ukuqashelwa kweHR's of Dubai Jobs Market kukhombisa ukuthi kuyaqalwa kabusha, ngokungajwayelekile emikhakheni ehlukahlukene. Bangatholwa ngokufaka izicelo zezikhundla ezidinga ubuhlakani nobuhlakani, njengokukhangisa noma uchwepheshe wokukhangisa, uchwepheshe ekusebenzeni kwamakhasimende noma ohlelweni lwesicelo seselula, ozokwethula i-CV yakhe, ngokwesimo somdlalo wekhompyutha noma iwebhusayithi. Ngokulinganayo, intando ye-infographic sebenza kunoma iyiphi enye insimu yokuqamba.
Kodwa-ke, uma singazizwa siqine ngokwanele ukukhuluma ngesipiliyoni sethu sobuchwepheshe kuvidiyo noma ukudweba incwadi yamahlaya - masiyiyeke iqhubeke futhi masingalandeli nje izinkambiso. - Kwesinye isikhathi phinda usebenzise ikhophi ye-inept, ukuphindaphindwa kwesifanekiso. Umsebenzi ompofu wepayipi kuphela okhethwayo - UJohn Smith uyabona.
I-Crazy But True - Leaflet esikhundleni se-CV!
Ukuhambisa amapheshana akudingeki kube umsebenzi ngezikhathi ezithile! Kungaba yindlela ukuthola umsebenzi eYurophu. Lokhu kufakazelwe nguDawid Dąbrowski usomabhizinisi wasePoland okhiphe amapheshana ezethula njengokhetho lomsebenzi ngaphansi kwezakhiwo zehhovisi laseWarsaw.
AbakwaPracuj.pl babuza uDavid ukuthi umbono uphelile yini ukuba hit futhi ingabe wathola umsebenzi wakhe wamaphupho.
Izindlela zokudala zokuthola umsebenzi zingase zihluke. Lapho abanye abantu beka amabhodi ngamabomu abo noma benza ama-fanpages ku-Facebook, uDavid wanquma ... amaflaya! Yasebenza?
Ubu ngifuna umsebenzi ngendlela engeyona ejwayelekile…
I-Dawid Dąbrowski: Angazi uma kungenjalo ngokuphelele. Nginomuzwa wokuthi indlela engiyisebenzisile yaziwa kabanzi, kepha empeleni abantu abayisebenzisayo ukufuna umsebenzi akuvamisile ukubonwa.
Kwenzeka kanjani ngempela?
UDavid. Ngisanda kukhipha amapheshana (ehleka). Kepha hhayi nje amapheshana. Ngakhonjiswa kubo ngezithombe zobungcweti, ngaphezu kwalokho ngabeka imininingwane yokuxhumana kimi nekhodi ye-QR ngakolunye uhlangothi lwephepha iqondisela kuphrofayela yami yobungcweti, ngakolunye uhlangothi ukuqala kabusha kwe-multimedia. Hhayi, benginikela ngaphandle nje kokunye, ngoba phakathi kwe8 ne9: 30 ekuseni emasangweni ezakhiwo ezinkulu kakhulu zamahhovisi eWarsaw, abasebenzi abalele bemamatheka ezindebeni zabo. Abaningi babo, ngemuva kokuthola ipheshana, nabo bamamatheka.
Umqondo wale fomu uvelaphi?
UDavid.: Ngiyathanda ukwenza izinto ezinje! Bengifuna umsebenzi wokumaketha. Ngalesi senzo bengifuna ukukhombisa ukuthi nginobuciko, ngicabanga ngokomqondo, imibono yami igxile ekufinyeleleni izinhloso ezithile nokukhipha imizwa ethile. Ifomu bekufanele likufakazele lokho Ngiyisisebenzi esiphupha sayo yonke inkampani. Ngaphezu kwalokho, akukho lutho olubi ngokwengeziwe lapho ufuna umsebenzi ofana nokungasebenzi nokulinda ama-imeyili angagelezi. Bengifuna ukwenza okuthile kokuqamba, phuma ezindongeni ezine. Kwakuyisipiliyoni esihle.
Kodwa-ke, kufanele utshale kulesisombululo ...
UDavid.: Lezi zincwajana zenziwe yimi uqobo, izithombe zathathwa ngumthwebuli engisebenza naye ngemuva kwesaphulelo, ngenza iphrofayili yobungcweti futhi nami ngenza i-multimedia CV ngokwami, kodwa lokho okuphrintiwe ngabe sekuthunyelwe yindlu yokuphrinta. Futhi, izindleko bezingaphezulu kakhulu, yize bekungotshalomali e-PLN 1,200. Ngeke ngiphike ukuthi inqubo yokulungiselela amapheshana kuphela kwangithatha cishe amasonto amathathu zomsebenzi nsuku zonke ngemuva kwamahora ambalwa. Kepha bekufanele ukuchitha lesi sikhathi.
UDavid.: Imiphumela yaba mihle. Ngaphandle kwempendulo eqondile evela kwabamukeli bamapheshana, ebiyinhle kakhulu, ngithole ama-imeyili amaningi ngokuhalalisela lowo mbono. Bekubalulekile kimi ngoba uma umuntu efuna umsebenzi, imvamisa akazizwa kahle.
Lokho kwakuyisisusa esidingekayo. Ngenze isamba samapheshana we-1000, ngakwazi ukukhipha amakhulu amahlanu ngeviki nesigamu, emva kwalokho angizange ngiphinde nginikeze okunye, ngoba ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokuqala komkhankaso waqala ukumenyelwa izingxoxo. Kwakunengqikithi yedlanzana labo, abanye babo ezinkampanini ezinkulu kakhulu ePoland.
Ekugcineni uthole kanjani umsebenzi?
UDavid.: Kungabonakala kumangalisa, kepha Ngithole umsebenzi ngibonga eDubai City Company (iyahleka). Yize ngithole imisebenzi eminingi ngibonga amapheshana, ngeDubai City Company ngathola ukuxhumana nomqashi wami. Nguye owanginikeza izimo ezingcono kakhulu futhi angingabazanga ukwenza isinqumo ngokusebenzela inkampani yami yamanje.
Uma kunesidingo, ingabe uzophinda lokhu kuhlolwa?
UDavid. Ngizokwenza konke ukuvimba lesi sidingo, kepha uma ngiphoqelelwa ukwenza kanjalo, ngizokwenza okuthile okumangazayo kakhulu. Ngiyathanda ukwenza izinto ezenziwa abanye!
Iseluleko esini ungabanikeza labo abafuna umsebenzi eYurophu namuhla?
UDavid.: Ukube benginakho ukubhekana nokuthile, kungaba yikho. Yenza lokho abanye abangakwenzi, bakholelwe bona nokuthi uma ufaka konke ukushisekela kwakho, ithalente nesikhathi sakho kokuthile noma kulula kakhulu eyodwa, ungenza okuningi.
Izinto ze-8 ezenza kube nzima ukuthola umsebenzi
Isithiyo ekutholeni umsebenzi kungenzeka kungabi neziqu ezingekho noma ezinganele. Okuningi kuncike nakwisimo sakho sengqondo. Cabanga futhi uma ukuntuleka kwemiyalezo evela kubaqashi kungabangelwa ukuthumela i-CV engeyona eyomuntu uqobo.
I-1. Ukuzibophezela okuncane ekufuneni umsebenzi
Izinkinga ekutholeni umsebenzi zingabangelwa ukuzibandakanya okuncane kakhulu, ngokwesibonelo, ngokungahambisi ngokuthumela i-CV yakho. Kubalulekile ukuhlola ngokuhlelekile ukunikezwa kwemisebenzi, isib Bayt.com i-portal - ukusebenzisa uhlelo lokusebenza leselula kukuvumela ukuthi udlulise amehlo kumikhangiso noma kuphi, nganoma yisiphi isikhathi. Ngaphambi kokuthumela i-CV, qiniseka ukuthi ufunda izidingo zomqashi bese uguqula i-CV yakho ukuze ihambelane nokunikezwa okuthile. Uma iziqu zakho zinganele ekunikezelweni okuningi, lolu lwazi olubalulekile - kufanele ugxile ekwakheni amakhono okuthola umsebenzi embonini oyithandayo.
I-2. Amaphutha namaphutha ku-CV
Umqashi ongaba khona ingasabisa amaphutha ku-CV yakho. Sicela uhlole okuqukethwe ngokucophelela ngaphambi kokuthumela idokhumenti. Uyacelwa uqaphele ukuthi azikho typos, isipelingi noma amaphutha esitayela.
I-3. Ayikho idatha edingekayo ku-CV
Ubunzima ekutholeni umsebenzi kungenzeka futhi kube ukungakwazi ukuxhumana nawe. Inombolo yocingo nekheli le-imeyili kufanele zifakwe ku-CV. Uma u khohlwa ngakho, umqashi ngeke akwazi ukuphendula uhlelo lwakho lokusebenza.
I-4. Ikheli elingamukeli lomamukeli wedokhumenti
Ngaphambi kokuthumela i-CV yakho, hlola njalo ukuthi ufake ikheli le-imeyili elifanele. Mhlawumbe inkampani ayiphenduli kuhlelo lwakho lokusebenza ngoba - ngokwesibonelo, ngenxa yencwadi engalungile - ayikayitholi imibhalo efanele.
I-5. Awekho amakhono okwanele adingekayo
Isithiyo ekutholeni umsebenzi nakho kungaba ukwehluleka ukufeza izidingo ezihlelekile. Uma inkampani yakho idinga ulwazi lwesiJalimane futhi umemezela kuphela isiNgisi, ukuvuma kwakho kunganqatshwa. Ngaphambi kokuthumela i-CV yakho, qiniseka ukuthi amakhono akho afana nokulindelwe ngumqashi.
I-6. Ukungabi nesipiliyoni / iziqu eziphakeme kakhulu
Ubunzima ekutholeni umsebenzi kungahle kubangelwe ukuntuleka okuhlangenwe nakho kobuchwepheshe noma iziqu eziphakeme kakhulu. Uma umqashi efuna umuntu ubuncane beminyaka ye-3 yamava, cishe ngeke ameme umuntu ozothatha izintambo osanda kuqeda izifundo zakhe. Kwesinye isikhathi, okuhlangenwe nakho okuningi kakhulu kuyisithiyo.
Umqashi owazi ukuthi iziqu zakho zingaphezu kwezidingo zakhe uzosaba ukuthi uzoyeka ngokushesha ukusebenza ukubheka izinselelo ezinkulu kanye namathuba ochwepheshe.
I-7. Ukuziphatha okungalungile ngesikhathi sokuxoxisana
Isebenze - i-CV yakho unentshisekelo yokuqasha ngokwenele ukuthi ukumemele kwinhlolokhono. Umphumela wayo uncike ikakhulukazi esimweni sakho sengqondo - uma wenza kabi, uzolahlekelwa yithuba lakho lomsebenzi. Isikhathi sakho sokubamba isikhathi, ulwazi lomsebenzi wenkampani nezinhloso eziqondile zomsebenzi kubalulekile.
Ungacelwa futhi ukuba uxazulule umsebenzi, ngakho-ke uzimisele ukukwenza. Uma naphezu kwemizamo yakho, awutholi ukunikezwa kwemisebenzi, yenza iziphetho - kuyoba usizo ukucela umqashi ukuba uthole impendulo ekufakweni kwakho. Mhlawumbe omunye umuntu ocela isikhundla esinikeziwe ubonise ukulungele kangcono inkambiso yenhlangano yenkampani.
I-8. Ukungabi nokholo ngamakhono akho
Uma amakhono akho nesipiliyoni sakho sikuthakazelile umqashi, kusho ukuthi unethuba lokuthatha isikhundla. Ngokukhombisa ukungaqiniseki kwakho, ukungazethembi nokwesaba amaphrojekthi, ungaphuthelwa ithuba lakho lokusebenza. Ukhuphula ukuzethemba kwakho, cabanga ngamakhono akho neziqu zakho - kuyabonga kubona lokho ungakwazi ukwamukela umsebenzi wakho wamaphupho.
Ungangifingqa kanjani ngokucophelela impilo yakho yobuchwepheshe, kodwa ngokucophelela?
I-CV kufanele ibe isifinyezo sempumelelo yakho yangaphambilini. Kumele ibhekele incazelo ka isipiliyoni namakhono Amagama amathathu aqakathekile: ngokuqondile, ngokungacabangi futhi ngesihloko.
Izakhi ezibaluleke kakhulu ze-CV yomsebenzi
I-CV yisiboniso sakho. Akumele kube sobala kuphela futhi kube yinkimbinkimbi ngangokunokwenzeka, kodwa futhi kube mahhala kuzo zonke izinhlobo zamaphutha - okukhona, ukupela kanye nesitayela. Izinto ezibaluleke kakhulu okufanele uzibeke ekuqhubekeni kwakho zingezwe ngezansi.
I-CV kumele ibe negama nesibongo somuntu ozobhalwa, kanye nemininingwane ezokwenza ukwazi ukuxhumana naye: inombolo yefoni nekheli le-imeyli. Kubalulekile ukusebenzisa ikheli le-e-mail elihle.
Okuhlangenwe nakho ku-CV
I-CV kufanele ibe nohlu lwezikhundla ezazikade zihlala kulo - ikakhulukazi lezo ezifakazela ulwazi lwemboni. Kuyafaneleka ukubachaza kafushane, usho ubukhulu bemisebenzi. Izikhundla ezisetshenzisiwe kufanele zethulwe ngokulandelana ngokulandelana kwezikhathi - ukuqala ngomsebenzi wokugcina owenziwe.
Le ngxenye yokuqalisa kabusha kufanele ibe nemininingwane ephathelene, phakathi kolunye ulwazi lwezilimi zakwamanye amazwe neziqu zobungcweti. Kuyafaneleka futhi ukukhuluma ngamakhono athambile - ikakhulukazi lawo lokho kuzosiza emsebenzini ongase ube khona.
Uhlu lwezifundo ezigcwalisiwe nezitifiketi ezitholile
Uma ubambe iqhaza kwizifundo ezengeziwe kanye nokuqeqeshwa - bhala ngakho ku-CV yakho. Gxila kakhulu kuleyo misebenzi lokho kungahle kube wusizo esikhundleni osithandayo.
Yisho umgomo womsebenzi
Uma usuhlelweni lokudala i-CV, ungabhala imisho embalwa mayelana negoli lakho lomsebenzi. Yethula ukuthi zithini izinhlelo zakho zentuthuko eqhubekayo, chaza ukuthi yini ohlose ukuyifinyelela. Ngenxa yalokhu, uzobonisa umqashi ongaba ngumqashi ukuthi wena ube nomqondo wakho futhi wazi ukuthi yini ofuna ukuyifinyelela esikhathini esizayo.
Umthetho obalulekile - Vuselela idatha
I-CV yochwepheshe kufanele ivuselelwe njalo. Kufanele ivumelane nezimo zomsebenzi ezithile, egcizelela izici namakhono afiswa ngumqashi ongaba khona.
Ukuthembeka e-Dubai ngaphezu kwakho konke okunye
Akunamininingwane yamanga engafakwa ekuqhubekeni kabusha. Musa ukufaka amakhono ongenawo. Kuzavela amanga lapho amakhono achazwa ngu uzoqinisekiswa.
Ithuluzi eliwusizo - umdali we-CV ku-intanethi
Umakhi we-CV angakusiza ulungiselele ukuqala kabusha okuphelele, okufundekayo. Ngenxa yakho ngeke ukhohlwe ngokufaka izinto ezibalulekile embhalweni. Uzobuye unakekele uhlangothi lwayo olubonakalayo. Khumbula ukuthi i-CV yakho idlulile ukuthola umsebenzi wakho wamaphupho.
Indlela yokuma nokudala i-CV yangempela?
Umlando omnikeza umqashi usho lukhulu ngawe. Ungafunda kulo ukuthi unaka imininingwane, ukuthi ngabe unembile futhi… uyakhanga.
I-resume engavumelaniyo yomchwepheshe wezokukhangisa noma umklami wangaphakathi angakhanga. Hlola ukuthi ungabonisa kanjani ubuhlakani ngokusebenzisa, phakathi kwabanye, ngesimo somntwana, ukupheka noma ukugqoka izinwele.
I-CV yasekuqaleni futhi ebukeka kahle, noma yini?
I-infographics, ukuqalisa kabusha ngendlela yefilimu yevidiyo - kwezinye izimboni i-biography engavamile ingashlukanisa. Kodwa-ke, kufanele uzwele futhi ucabangele ukuthi ngabe le khambi empeleni izofanela.
Akuwona wonke umuntu okufanele aqokelwe i-CV engajwayelekile. Ungakhohlwa ukuthi okuqukethwe kubaluleke kakhulu kunokwakheka. Ochwepheshe lapho isibindi nokuqamba okuthile kungazukulimaza, isibonelo:
Uchwepheshe wezentengiso kulindeleke ukuthi akwazi ukuheha ikhasimende. Ukuqinisekisa umqashi wakho ukuthi ungathengisa futhi ukhuthaze… zikhuthaze. Isibonelo, unganikeza i-CV ngendlela yesiqeshana sevidiyo.
Ukusungula izinto kuyisici esibalulekile futhi kubaqambi bengaphakathi. Lapho ufuna umsebenzi kulo msebenzi, kufanele ubheje ekuqhubekeni kabusha kokusebenza ngesakhiwo sokuqukethwe esingajwayelekile. Idokhumenti kufanele ifake izithombe zobungcweti ze amaphrojekthi aqediwe phambilini.
I-Carer / uthisha CV
Ingabe uthisha wolimi lwakwamanye amazwe uqhubela izingane amakilasi? Noma mhlawumbe ufaka isicelo somsebenzi njengothisha wangaphambi kwesikole? Ungakhombisa indlela yokudala futhi, ngokwesibonelo, udale i-CV ngesimo sezandla (ama-embroideries noma ama-decoupage).
Ukusungula izinto kuyisici esibaluleke kakhulu futhi kochwepheshe abazinikezela kwezobuciko bezobuciko. Ukukhombisa ubuhlakani bakho, unganikeza umqashi wakho i-CV ngezithombe zobuchwepheshe bezitsha ezenziwe ngokwendlela yakho yokuqala. Ungazama nokubhala i-biography ngesimo se-… a cookbook.
Noma mhlawumbe kufanelekile ukuthumela umqashi ongaba khona ikhekhe elikhulu lapho "ongabhala" amakhono akho usebenzisa i-icing ngaleyo njongo? Ungabhaka amakhukhi ngokumangala lapho ufihla i-CV yakho.
Yenza umdwebi womdwebi / umdwebi we-CV
I-CV yomculi ozakhelayo ingaba nemibala futhi isebenze kahle, kepha ngasikhathi sinye icace futhi ibe sobala. Kuyafaneleka ukunamathisela kuhlelo lokusebenza isixhumanisi sephothifoliyo, lapho umqashi ezokwazi ukubona, ngokwesibonelo, amafilimu owenzayo ukwakheka nokwakha.
Izinto zokuxhumana ze-Multimedia zingabanjelwa ku-CV yakho futhi uma ufaka isicelo somuntu ophethe izinwele. Ungavumela ukubeka isithombe sakho emsebenzini emsebenzini. Kubalulekile ukuthi izithombe ziwuchwepheshe, okungukuthi zikhanyisiwe kahle, zilungiswe njll.
Qiniseka ukuthi ubuqambi bakho abubusizi ubuchwepheshe. I-CV ebalulekile ayilibaleki nje kuphela, iyafundeka futhi iqukethe imininingwane ebalulekile mayelana nesipiliyoni, amakhono nezinjongo zochwepheshe. Dala ukuphinda uqalise ukusebenzisa i-wizadi yePracuj.pl.
Yini ongayibhalela ku-CV yakho uma ungenayo isipiliyoni
Ukubhala i-CV ye umsebenzi wokuqala uyinselelo enkulu kubantu abaningi. Ukuze ukwenze kahle, udinga ukuthola isikhathi futhi uthulise ikhanda lakho - i-athikili izokusiza ekuphumuleni
Izindaba ezimnandi zokuqala - iningi lezinto ezidingekayo zokwakha amandla zisekhanda lakho. Lapho udala i-CV, kuzofanela ungene kuma-nook and crannies of memory yakho futhi zicabange, impilo yakho kanye nokuhlangenwe nakho okuhle kanye namandla akho kanye nokuthanda kwakho.
Qala ngemfundo - Uqedile isikole
Esigabeni "semfundo", sibeka izifundo eziqhubekayo noma eziqediwe (iziqu, izifundo, izifundo zokufundela iziqu, njll) noma isikole esiphelele sokufundela. Singakwazi ukufaka ulwazi oluthe xaxa ngolwazi lwangaphandle.
Asizingenisi izikole ezedlule - isikole samabanga aphezulu, isikole samabanga aphezulu noma esikoleni samabanga aphansi. Okuhlukile kuzoba yizikole eziphakeme, okutholwe kuzo iphrofayili nezinga lazo amakhono angeziwe, isibonelo, isikole esiphakeme esinenkulumo yolimi lwaseSpain.
Okuhlangenwe nakho kochwepheshe ku-CV
Uma usunokuhlangenwe nakho komsebenzi, chaza ngqo lokho okufundile futhi amakhono akho owatholile. Ungathola ama-internship akho, ama-internship nemisebenzi engajwayelekile ngesipiliyoni sakho.
Kodwa-ke, uma usuvele unesipiliyoni esibanzi esihlobene nezifundo zakho noma umsebenzi wesikhathi esizayo, ungahle ungafaki imisebenzi engajwayelekile noma yesizini ku-CV yakho. Gxila ku ichaza impumelelo yangaphambilini yobungcweti.
Umsebenzi wakho phakathi nezifundo zakho uhlobo oluthile oluthole. Qinisekisa izimpumelelo zakho esigabeni esithi "Okungeziwe komsebenzi".
Amandla nezintshisekelo ku-CV
Ezikhangisweni zomsebenzi, izidingo zamakhono zalowo okhetha ukhetho zivame ukunikezwa. Umuntu onjani inkampani enikezwe iyayifuna, ungathatha futhi ushiye emasikweni nenhlangano yayo yenhlangano, echazwe ku Ithebhu Yomsebenzi Womqashi futhi ngqo kuwebhusayithi yezindawo eziningi zemisebenzi eDubai nase-Abu Dhabi.
Amandla akho nezinkanuko zakho, ezihambisana nezilindele zomqashi, faka ezingxenyeni ezifanele ze-CV yakho.
Ngemva kokuzicabangela wena, isikhathi sesifikile isinyathelo sokugcina, esizokulungiselela ukudala i-CV enhle. Qoqa lezi zinto, uhlale phansi kukhompyutha futhi ... ulungele :)!
Isithombe sobuchwepheshe se-CV
Izithombe ezinhle ze-CV zibonisa umuntu ozozikhethela kusukela emahlombe enyuka, isendlalelo esihle futhi ngokumamatheka. Kufanele ugqoke ihembe noma ibhulawuthi ebushelelezi, engathathi hlangothi yesithombe sebhizinisi. Khumbula izithombe eziseqophelweni eliphezulu. Uma ungenaso isithombe okwamanje, ungakhathazeki - ungathumela i-CV yakho ngaphandle kwesithombe. Ukuba ekuqaleni komsebenzi wakho, kufanelekile ukuthatha isithombe esinjalo - izoba wusizo ngekusasa. Ungasebenzisa izinsizakalo zomthwebuli wezithombe noma uhlanganyele esimweni sebhizinisi mahhala, okuyinto ejwayelekile eyenziwe yemicimbi yezitshudeni noma Fairs yomsebenzi.
Izitifiketi zezifundo ezigcwalisiwe, izitifiketi ezamukelwe, imiklomelo kanye nokuhlukaniswa ku-CV
Qoqa lezo ezisetshenziswe ngempela wena futhi uzoba yimpahla yomqashi. Uma ukhumbula usuku lokuphela kwezifundo nomhleli, akudingeki ukuthi ubheke okwangempela. Uma ungaqiniseki, yiya kumadokhumenti aqoqiwe.
Bhala izinsuku nobubanzi bezifundo, ukuqeqeshwa. Gqamisa lezo zinto ezinazo ukuthuthukisile futhi ukhombe amakhono akho owatholile.
Isibonelo esihle se-CV sihlanganisa igama lokuqeqesha, umhleli, usuku nosuku oluqondile oluthathe esikoleni e-Dubai.
Ungathola kanjani isipiliyoni sokuqala futhi ucebise i-CV yakho?
Ukuzilibazisa okwenzela isikhathi samahhala kuhlobene kanjani nokuthola umsebenzi wokuqala? Kuyini ukuhlobana phakathi kokuqashwa kwenkampani yakho yokuphupha kanye nemisebenzi engavamile ngesikhathi samaholide ?.
Yini ukubaluleka kokuhlela umcimbi wokupha, umhlangano wabafundi noma ingqungquthela yesayensi yebhizinisi? Kuyavela ukuthi konke lokhu idlala indima enkulu! Abaqashi bayazazisa izitshudeni ezisebenzayo, ezizimisele futhi zigcwele amandla.
Yiziphi izakhi ezizopaka i-CV yakho e-Dubai?
Ingabe unamakhono noma izintshisekelo ezingejwayelekile? Noma mhlawumbe usunqobile umklomelo emncintiswaneni wezimboni? Lapho wenza i-CV, sicela wazise umqashi wakho ongase abe khona. Qiniseka ukuthi isithombe sakho siyahambisana nemibhalo yokuqasha.
Lapho wazi futhi wazi, mkhulu amathuba akho okuthola umsebenzi wakho wamaphupho. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ungawethula kanjani amandla onawo. Ukwenza i-CV yakho ihehe ngokwengeziwe, faka izinto ezinjengokuthi, ngokwesibonelo, ukuthi kubalulekile e-UAE.
Ukubamba iqhaza emiqhudelwaneni yamazwe omhlaba, ukuthola imiklomelo yezimboni, ukwenziwa kwamaphrojekthi ahehayo, sebenza eceleni kochwepheshe abahamba phambili - Ukhuluma ngezinto ezinje, uzoziveza njengomuntu ubambe iqhaza kwezentuthuko. Kubalulekile ukuthi imininingwane oyinikezayo ibhekisele kuzidingo zomqashi.
IsiJapan, isiShayina, isiKorea, isiCzech, isiRashi, lezi yizibonelo zezilimi zakwamanye amazwe ezinolwazi lwazo oluvame kakhulu kunekhono lokusebenzisa, ngokwesibonelo, isiNgisi. Ulwazi lolimi lwe-niche lungaba yimpahla enkulu futhi khulisa amathuba akho emakethe yomsebenzi.
Ukuzinikela neminye imisebenzi eyenziwa ngaphandle kwamahora okusebenza.
Ingabe uyivolontiya esisekelweni? Noma mhlawumbe ngesikhathi sakho samahhala, uhlela imisebenzi yezemidlalo yezingane noma wenza okuthile ukuze kusizakale umphakathi wendawo? Ukuthatha imisebenzi enjalo kufakazela ukuthi uyakwazi ukubamba iqhaza futhi uzwele.
Kuhle futhi ukusho i izintshisekelo ezikusiza ukuthuthukisa amakhono. UChess ufundisa ukucabanga okunengqondo. Ukuhamba kuyasiza ekufundeni izilimi zakwamanye amazwe. Ukwenza imodeli kufakazela ukubekezela, njll.
Kubalulekile ukuthi ifonti ezobusa empilweni yakho izonikezwa ngendlela enembile futhi ngokusemthethweni. Ngenxa yalokhu, i-CV izoba okucacile kakhulu. Kungcono ukuyeka amafonti afana ne-Courier, ama-Comic Sans noma i-Vivaldi. Ungabheja, isibonelo, u-Calibri noma u-Arial.
Ukubeka isithombe kudokhumenti kwenza kube lula ukuthi umqashi ahlobanise izimpumelelo nomuntu othize. Ukuthatha izithombe ngobungcweti nakho kungenza idokhumenti libukeke lingcono. Isthombe futhi singenza ukuthi ukhunjulwe uma, ngokwesibonelo, uzokhonjiswa kuye isikibha esine-hashtag: #task me.
Izici ezengeziwe zezici
Izithonjana ze-CV, i-infographics, umugqa wesikhathi - ukwethula okuqukethwe ngendlela yezithombe nezinhlelo kwenza kube lula ukuthola imininingwane efanelekile, efana nemininingwane yokuxhumana, iziqu, njll. Imidwebo ingenza ukuthi idokhumenti ibukeke ikhange ngokwengeziwe. Ngasikhathi sinye, kufanelekile ukukhumbula ukuthi lokhu okuqukethwe, hhayi uhlobo lokuqalisa kabusha, kubaluleke kakhulu.
Imibala ku-CV yakho
Akunandaba noma yimiphi imibala oyikhethayo, i-CV yakho kumele icace futhi ibe sobala. Isibonelo, uma ufaka isicelo somsebenzi embonini yezemfashini, ungasebenzisa imibiko yePantone lapho kubhalwe khona imibala eshisa kakhulu ngesizini enikeziwe.
Namathisela izitifiketi ku-CV yakho eqinisekisa ukuthi unamakhono owasho. Ungase futhi beka iphothifoliyo noma isixhumanisi kuwebhusayithi enamasampula womsebenzi wakho.
Ukukwazi ukufunda ngaphezu kwakho konke
Lapho ufaka ezinye izinto zokudala ku-CV yakho, qaphela. I-biography ingaba yingqayizivele futhi ivelele kusuka kwezinye izinhlelo zokusebenza. Kubalulekile, kodwa-ke, ukuthi kuyenzeka futhi kuqinisekisa ngokusobala ukuthi ungumuntu ofanele ukuthola isikhundla.
Ungabhala kanjani i-CV yesimanje ngohlobo lwe-Emirates?
Ukulinganisa, okubonakalayo, ngokuhlukaniswa nolwazi oluqondile mayelana nemisebenzi eyenziwe, izinga lamakhono olimi angaphandle kanye namanye amakhono. I-CV enjalo kufanele ilungiswe ngonyaka omusha.
Idokhumenti akumele ibe nobuciko ifomu ukuheha ukunakwa. Kubalulekile ukuthi iphendule ikakhulukazi kuzidingo ezibekwe ekuhlinzekweni ngomsebenzi.
I-CV akufanele ibe yinde kakhulu. Ngizocela imininingwane eminingi emhlanganweni wokuqashwa kwabantu. Ukubona imininingwane ebaluleke kakhulu egqanyiswe ekuqaleni kokuqala - nakanjani ngizohlala isikhathi eside ngumbhalo onjalo. Ngibonga kakhulu lapho ama-CV ekhona ifaniswe nokunikezwa umsebenzi engikubeke esikhangisweni.
Ngaleso sikhathi ngiyaqiniseka ukuthi lowo ozobhapathiza uzama kanzima futhi angathumeli ukuphindaphinda ngesilinganiso esikhulu kunoma yikuphi ukunikezwa, kodwa ubheka ngokucophelela umqashi oqondile.
Ngabe ugxile entuthukweni? Uyazifeza izinhloso zakho? Ngabe uhlaziya isipiliyoni sakho sobuchwepheshe? Awunabo ubunzima ukujwayela izimo ezintsha? Bhala ngakho ngakho kwi-CV yakho usebenzisa amagama athile.
Ngenxa yalokhu, uzoziveza bese wenza amathuba akho akhule. Kubalulekile ukuthi lokho okubhaliwe kusekelwa izibonelo, okungukuthi kubhekisela ekuhlangenwe nakho okuhlangenwe nakho futhi kubonisa ukuthi unamakhono afanele abaqashi.
Iyini i-CV mayelana nomfundi?
I-CV yakho ingakwazisa ukuthi ungumuntu ongazibandakanya, unemibono engajwayelekile futhi unesifiso sokulandela izinhlelo zakho zobuchwepheshe. Ukuze ukuze i-CV yakho ikunikeze isitifiketi esihle, ungakhohlwa ngezici ezibalulekile ezifana:
Ukuvuselela imininingwane ethunyelwe ku-biography yakho ayiphumi nakancane. Lapho uqala unyaka omusha, nakekela i-CV yakho bese ungeza amakhono neziqu ezisanda kutholwa. Ungakwenza ngisho noma ungahlose ukuguqula indawo yakho yomsebenzi kungekudala. Kuyindlela enhle yokufingqa impumelelo yakho yomsebenzi unyaka wonke.
Kuhle ukuthi uma igama lenkampani lapho umqashi esebenze khona noma esebenze, bhala imininingwane emfushane ngemayelana nomqashi ekhethekile, isib. Umkhiqizi wensimbi noma ummemezeli weselula.
Ngingathanda nokufunda ku-CV ngemisebenzi eyenziwa yilowo nalowo makhethwe nguyena ngisebenze nabaqashi bangaphambili futhi elihambelana nokunikezwa kwami ​​umsebenzi. Asikho isidingo sokubhala ukuthi othile ubesebenza njenge-waiter 15 eminyakeni edlule uma manje esengumele uchwepheshe wezinsizakalo.
Ukuhlangana kwezithombe nobungcweti. Ngabe ufuna ukwenza umbono omuhle kumqashi ongaba khona? Yakha kahle uhlobo lomuntu siqu. Yiba ongaguquguquki ekukhethweni kobungcweti futhi uthuthuke endaweni ethile. Futhi, qinisekisa ukuhambisana kwemibhalo yokuqasha neminye imithombo yolwazi ngawe. Umqondo uwukuthi i-CV yakho, incwadi eyemboza, iphothifoliyo nesimo sakho sengqondo kuhambisana.
Okuqukethwe okubonisa "amakhono w kusasa". Ngabe ungasebenza eqenjini, ukhombise isimo sengqondo sokusebenza futhi unamandla okusebenzisa imidiya emisha? Ungakhohlwa ukuyisho ku-CV, echaza isipiliyoni sakho sangaphambilini sobuchwepheshe nemisebenzi eyenziwe.
Ukuhlelwa kwesithombe se-CV kungenye yezinto eziveza kakhulu. Uma kuhambisana nomfanekiso wakho, ungafaka imidwebo kudokhumenti noma uchaze isipiliyoni usebenzisa umugqa wesikhathi. Kubalulekile ukuthi ukwelashwa okunjalo kube nomthelela omuhle hhayi ekuheheni kuphela kepha nasekufundeni kwendaba yempilo. - Uma ngifunda i-CV, kubalulekile kimi ukuthi imininingwane ebaluleke kakhulu ekuyo kufanele igqanyiswe ukuze isetshenziswe ngesibindi nangaphansi.
Ubuqiniso be-CV yakho ku-UAE
Ungadala isithombe esingafani nakancane. Zithuthukise ngokwakho, uthuthukise amakhono akho futhi ube ngokwakho.
Ingabe i-CV yakho ihambisana okulindelwe ngumqashi?
Ukwenza idokhumenti emangalisayo, enobuchule kakhulu kungakulethela izinzuzo, kodwa ngaphansi kwezimo ezithile. Khumbula lokho okuqukethwe nokuhambelana kwawo nezidingo zomqashi ongaba khona zibaluleke kakhulu kunefomu. Kubalulekile futhi ukuthi i-CV ihambisane nomsebenzi lowo. Uma ufaka isicelo sesikhundla emnyangweni wokubalwa kwezimali, kungcono ukugwema imibala ebushelelezi nezithombe zobuciko.
Izinto ezinjalo zizobukeka zingezemvelo. Kuhle ukuma ngaphandle kodwa ngendlela eyakhayo. Ngokwesimo sobungcweti obudinga ubuhlakani ngaphezu kwakho konke, umuntu angaphambuka kancane kusuka kuma-classics aqediwe futhi abeke izindlela ezinamandla zokukhuluma, edlala ngemibala noma eshintsha ukwakheka kokuqukethwe.
Lapho ufuna umsebenzi, kufanelekile ukuvulelwa amathuluzi anamuhla futhi uwasebenzise. Isibonelo, ungathola amandla wohlelo lokusebenza leselula le-Pracuj.pl, elikuvumela ukuthi uphendule ngokushesha ekunikezelweni futhi likunikeze ithuba lokuqapha isimo sohlelo lwakho lokusebenza.